Home/ समाचार/कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय खोल्न जाँदा देखिन् यस्तो, को हो बारम्बार यस्तो गर्ने ? (भिडियो)
पोखरामा पछिल्लो समय वडा कार्यालयहरुमा चोरको बिगबिगी छ । पोखराका धेरै वडाहरु चोरीएपछि पनि अझै बाँकी रहेका वडाहरुले साबधानी नअपनाउदा अर्को दुर्गती भोग्नु परेको छ । बिहान करिब ९ः४० मा कार्यालय सहयोगीले पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ को कार्यालयको गेट खोलिन् ।
कार्यालय भित्र रहको पहिलो कोठाको चाबी खुल्लै थियो । भित्र हेर्दा कागजात तथा कलमहरु टेबलमा छरपष्ट थिए । उनले सोचिन् शुक्रबारको कार्यक्रममा प्रयोग भएका कागजपत्र तथा कलमहरु मिलाउन भ्याएनन् त्यतीकै छोडिदिएछन् । पछि उनी वडाध्यक्षको कक्षको ढोका खोल्दा सातो गयो ।
झ्यालको ग्रिल खोलेर सोफामा राखिएको रहेछ, सोफामा जुत्ताका डाम थिए उनी आत्तिएर अर्को कर्मचारी यएबहादुर बस्नेतको घर गईन् र तत्काल वडाध्यक्ष जिवनप्रसाद आचार्यसंग सम्पर्क गरि वडा कार्यालय चोरी भएको प्रहरी समक्ष रिपोर्ट पुग्यो । हेर्नुहोस् भिडियो कसरी वडा कार्यालय चोरीएछ…
१८ किलो सुनकाण्डमा अहिलेसम्मकै ठूलो खुलासा, गगनको ज्यान गयो, हत्यामा युवती प्रयोग
चितवनकी यी महिला जस्ले १६ लाख ५० हजार रकम ब्याजमा लिएर ४० लाख ४९ हजार तिर्दा पनि सकिएन ऋण, अहिले घरबास नै उठ्यो, परिवारको बिचल्ली
प्रकाश पत्नी बिनाले चुनाबी सभामा सम्बोधन गर्दा यस्तो भनेपछि सभानै भाबुक भयो ! हेर्नुहोस
नेपालबाट भारतलाई धुलो चटाउने यी ३ घटना ,पढ्नुहोस